Azerbaijan: Nahemotra indray ny fitsarana ilay bilaogera an-dahatsary · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Marsa 2019 5:47 GMT
Ao anatin'ny heverin'ny maro fa fitsarana misy ambadika politika ho fanapenam-bava ny mpanohitra ao Azerbaijan, niseho indray tao amin'ny fitsarana androany ireo tanora mpikatroka bilaogin-dahatsary Adnan Hajizade sy Emin Milli.
Nosamborina tampoka vao maraimben'ny 8 Jolay ireo tanora mpikatroka, fitaratra amin'ny fampiasan-dry zareo fampitam-baovao ao amin'ny faritra rehefa avy notafihana tao amin'ny trano fisakafoanana iray ao afovoan-tanànan'i Baku, renivohitra Azerbaijaney.
Omalin'ny fotoam-pitsarana hafa, namintina ny fahatsapany manokana momba ny raharaha ny bilaogeran'ny Flying Carpets and Broken Pipelines, Arzu Geybullayeva.
Ny ampitso maraina, nanao lahatsoratra tahaka izany i L4L na dia somary fohy aza ary ahitana vazivazy, angamba mba hampaherezana ny hafa.
Vaovao farany: Ora fohy taorian'ny fotoam-pitsarana, nanao lahatsoratra faharoa feno fampanantenana mandinika ny zava-nitranga i L4L. Namintina ny hatezerana, ny hadisoam-panantenana sy ny fanantenana tsapan’ny mpanohana ireo mpikatroka antserasera roa ny bilaogy.
Azo jerena ao amin'ny fizarana Azerbaijan ao amin'ny Global Voices sy ny OL! Blog (amin'ny teny Anglisy sy Azeri) ny fitantarana feno ny fanagadrana sy ny fitsarana an'i Adnan Hajizade sy Emin Milli. Hita ao amin'ny Twitter ihany koa ny tenirohy #EminAdnan.